Jereo ny hetsika voalohany nanome fiainana ny zavakanto maoderina | Famoronana an-tserasera
Ny kanto maoderina, na izay nitranga tamin'ny faran'ny taonjato faha-70 ka hatramin'ny taona XNUMX tany ho any, dia andiam-panetsahana, izay maro no ho fantatrao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny sasany amin'izy ireo isika, manokana avy amin'ireo izay nipoitra voalohany (avy amin'ny Impressionism to Dadaism). Ho hitantsika koa ireo mpanakanto fototra ao aminy. Andao hanomboka ity dia mahavariana ity amin'ny alàlan'ny tsirairay amin'izy ireo!
5 Fauvism na fovism
7 Kobisme sy fananganana
Ny fahatsapana ny fihetsiketsehana no hetsika lehibe voalohany amin'ny zavakanto maoderina. Mampiavaka azy ny fikarohana hazavana, fanaovana sary hoso-doko eny ivelany. Amin'izany fomba izany ireo sary hosodoko dia mahazo tonony mavitrika sy mavitrika, miaraka amin'ireo tarehimarika manjavozavo sy manjavozavo izay misarika ny fotoana iainan'ny fotoana. Ity hetsika ity dia mifanohitra amin'ny fisehoana izay namboarina taloha tamin'ireo sary, tena voafaritra sy feno ny maha izy azy, nolokoina tamin'ny studio. Misongadina amin'ity vanim-potoana ity Claude Monet.
Mpanakanto mahafinaritra efatra no misongadina eto: Van Gogh (afaka mianatra bebe kokoa momba ny fiainany manokana ianao amin'ity lahatsoratra teo aloha ity), Gauguin, Seurat ary Cézanne. Mbola mitohy ny "sorisory sorisory" fa sary hoso-doko mahazo fanehoan-kevitra bebe kokoa ary mifehy lohahevitra kokoa izy ireo, mijanona tsy maneho ny natiora tamim-pahatokiana.
Raha jerena ny fitaomana lehibe ny zavakanto impressionista, dia mipoitra ny kanto voalohany. Te hiverina any am-piandohana ilay mpanakanto, aingam-panahy avy amin'ny kolontsain'ny tantsaha (takelaka voaloko, zavatra misy loko mahazatra ...), saron-tava afrikana, zavatra avy amin'ny olona prehistorika ... Asongadin'i Klimt.
Eto ny loko dia mahazo fifandraisany manokana, ampiharina amin'ny canvases teboka miloko an-tapitrisany misaraka, ny maha-mason'olombelona ilay manindry sy mampifangaro azy ireo.
Fauvism na fovism
Fauvism dia manandrana manapaka ny soatoavina hatsarana teo aloha, mamorona, amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny fomba, sary hosodoko maro loko izay tsy maninona ny endrik'ireo tarehimarikafa ny fihetsem-po ampitainy. Miavaka i Henri Matisse.
The Dance, nataon'i Henri Matisse
Any Alemana, aingam-panahy avy amin'ny Fauvism, Expressionism, ary Primitivism miakatra ilay Blue Rider. Izy io dia ny fiandohan'ny abstraction, ny fisarahana amin'ny tontolo tena izy. Misongadina indrindra ny mpanakanto Kandinsky.
Ireo sary hoso-doko dia mahazo amin'ny fanehoan-kevitra, amin'ny fomba toy izany izay hita dia tsy nolokoina, fa izay tsapa manoloana izay hita. Van Gogh dia miavaka amin'ny hetsika ihany koa, toa an'i Edvard Munch, miaraka amin'ny sary hosodoko malaza The Scream.
The Scream, nataon'i Munch
Kobisme sy fananganana
Ny Cubism dia misokatra miaraka amin'ny The Young Ladies of Avignon, avy amin'i Pablo Picasso (mianatra bebe kokoa momba ny fiainany liana te hahafanta-javatra amin'ity lahatsoratra teo aloha ity). Amin'ity hetsika ity, ny singa rehetra amin'ny asa dia avoaka, fomba fijery manahirana sy fampiasana endrika geometrika.
Amin'ny fanabeazana, miavaka koa ny endrika geometrika, ankoatry ny fitaovana, maritrano ary teknolojia, manasongadina ny famolavolana karazan-javatra rehetra.
Ity hetsika ity, nataon'ny tanan'i Marinetti, mandà ny hatsarana nentin-drazana, ny milina fanandratana sy ny fihetsik'izy ireo mifandray. Noho izany dia aseho antsika ny zava-misy feno hetsika sy mavitrika.
Fifangaroana eo amin'ny cubism sy futurism, manandratra ny vortices ho teboka angovo lehibe indrindra, hoy i Ezra Pound.
Ity hetsika ity dia natao mba hampahatsapana ny mpijery amin'ilay asa, hanafoanana izay tena zavatra fantatra ao. Ho an'ity, noforonina ny filaharana, notsorina ny silhouette, ary ny loko dia nihena ho vitsivitsy. Misongadina i Malevich.
Ireo sary hosodoko dia manohy nohamoraina, ka nanjary soloina amin'ny loko voalohany telo fotsiny: mena, manga sy mavo. Ny endriny jeometrika dia roa ihany koa: toradroa sy toradroa. Ary koa, ny tsipika mitsivalana sy mitsangana ihany no voaloko. Miala tanteraka amin'ny fampisehoana zavakanto ny zavakanto ny artista. Miavaka i Mondrian.
Ireny dia anarchista manam-pahaizana, mpanakanto te handrava ny zavakanto, amin'ny fanehoan-kevitra manohitra ny fahefana napetraka ary taorian'ny Ady Lehibe I. Raha tsy nahatratra ny tanjon'izy ireo dia nanome ny fampandrosoana ny pop art, punk, zavakanto misy fotokevitra, surrealism ... Nihomehy ny mpanakanto bourgeois sy ny hatsaran-tarehy araka ny fantatra ny dadaists, namorona sanganasa miaraka amin'ny fitaovana tsy mahazatra, manararaotra ny fihomehezana sy ny fihantsiana. Misongadina i Tristan Tzara.
Ary ianao, miaraka amin'ny hetsika kanto maodely no tena ahalalanao azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Jereo ny hetsika voalohany nanome aina ny zavakanto maoderina